Sheekada Filimka Kong Skull Island : Waa filim kii ugu weynaa ee la sameeyo kadib Godzilla
March 10, 2017 No Comments News, Somali 952 views
Filimka Kong: Skull Island waa filim kii ugu weynaa ee la sameeyo kadib Godzilla marka laga hadlayo kuwa xayawaanadda dilaaga ah ay ku jiraan,
Kong-aan waxaa director ka ah Jordan Vogt-Roberts.
JILAAYAASHA : Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L Jackson John C Reily, Corey Hawkins, Jin Tian, Tobby Kebbell, Jason Mitchell, Shea Whingham, Thomas Mann and John Ortiz.
Muxuu ku socda:
1944, Duuliye maraykan ah iyo Mid Japanese ah ayaa ku Xayirmaya Jasiirad aan la aqoonsaneyn waxayna isku dayayaan inay iska takhalusaan balse waxaa soo weeraraya Daanyeer weyn oo dagaalkoodii waxba kama jiraan ka dhigaya.
WOW! Shanta daqiiqo ee u horeysa filimka waxaa bilaabanaya dagaalka iyo action-mo Waxaana indhahu qaban karaan durba King Kong.
Soddon sanno kadib Bill randa (John Goodman) iyo Brooks (Corey Hawkins) oo u Hawlgala Hay’ad qarsoodi ah oo dawli ah ayaa fasax u ogolonayo inay daraasaddo kusoo sameeyeen Dhulka Jasiiraddan kasoo qaadanaya Madaxdooda waxaana ay soo wadanayaan (Tom Hiddleston) oo ah Sarkaal ka tirsanaan jirey Hay’ad duulimaad, Si uu kor ugalasocdo Iyo Korneel Packards(Samuel L Jackson) iyo Koox Melitary ah iyaguna bad qabkooda loo xilsaaray.
Ma ka badbaadi doonaan Kong oo ku nool Jasiiradaas?
Dhaq dhaqaaqani wuxuu carro Weyn ku abuuri doona Kong oo weerar ba’an kala hor tagi doona Tiro Askartii Korneel packards-na ka takhalusi doono waxeey ku kalifaysaa In saddex qeybood ukala baxaan muddo 30 sano ah.
Jasiiraddaan sidoo kale waxaa ku nool oo Isku Haya Kong Iyo Bahal Aad u khatar badan Oo Dhimasho badan ku keeni doona kooxdan Dalxiisayaasha ah.
DAL-DALOOLADDA NUXUR TIRIYA FILIMKA QEYBO KAMIDA:
Nasiib Darro Doorarka Jilaayaasha dadka ah hoos u dhac baa ku jira qeybtood;
Tom Hiddleston isagu waa geesi aan si fudud ku dhimaneyn. Brie Larson iyada mid loo bogi doono ma noqon doonto,Samuel L Jackson isna kumuu guul dareysan doorkiisa oo biyo umuusan kaban.
SAAMEYNTA HAWSHA SOO-SAAREYAASHA FILIMKA:
Shaqo Amaan mudan oo muhiim ah bay qabteen kooxda filimkaan Guud ahaan, Editor-ada, Qeybta VFX-Ka iyo Kooxda Duubeysay Iyo Directorka oo isna Sheekadda Filimka Iyo Action-modisa siduu iskugu duba riday ay dhabadda u xaartay Kong: Skull Island Soo dhaweynta calaamkaba.
Gaba-gabodii Kong:Skull Island waxaa aad usoo dhaween doona Dadka xiiseeyo isagoo kale ah oo aad is dilku ugu badan yahay waxaa laga filayaa inuu Lacago badan soo xareyn doono.
HOOS KA DAAWO TRAILERKA FILIMKAN
Abhishek Bachchan oo bartiisa Instagaramka soo dhigay sawir aan inaba caadi ahayn! ka arag halkan
RASMI: Halkan ka baro 11 jilaa oo wax garab ah kahelin waalidkod meel sarena ka gaaray Bollywoodka!
WARBIXIN+SAWIRO: Varun Dhawan oo tababar joogto ah ugu jira filimkiisa “Judwaa 2” ee uu labada qof kujilayo